ဇနီးနဲ့ သားနဲ့အတူ မွေးနေ့စပရိုက်လုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း – Suehninsi
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် MMA Fighter ဖြစ်သူ အောင်လအန်ဆန်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ကချင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ထူးဆောင်အနေနဲ့ ပွဲတိုင်းကျော်ကာ အောင်ပွဲတွေကို အရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အောင်လအန်ဆန်းကတော့
အမေရိကန်နိုင်ငံသူ ဇနီးသည်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားတစ်ယောက် ၊ သမီးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်.။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးကိုတော့များမကြာမီက မွေးဖွားခဲ့ပြီး သမီးဖြစ်သူလေးရဲ့ ပုံလေးတွေကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ချစ်မဝဖြစ်ကာ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ(၂၂)ရက်နေ့မှာတော့ အောင်လအန်ဆန်းက
သူ့ရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ဇနီးနဲ့ သားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူ မွေးနေ့ကိတ်ခွဲ မွေးနေ့သီချင်းဆိုကာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို “Don’t ask my family to sing. youasong . P.S. protein cupcakes taste exactly like how you would thinkaprotein cupcake will taste.” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်းကတော့
သမီးဖြစ်သူကို ချီပြီးထိုင်ကာ ဇနီးနဲ့သားဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့ သီချင်းဆိုသံကို နားထောင်ကာ ပြုံးရွှင်စွာ လက်ခုပ်တီးပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ပုံပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီကနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကို ပြောပေးခဲ့ပါဦးနော်.။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဂုဏျထူးဆောငျ MMA Fighter ဖွဈသူ အောငျလအနျဆနျးကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော။ ကခငျြလူမြိုးဖွဈပွီး မွနျမာ့ဂုဏျထူးဆောငျအနနေဲ့ ပှဲတိုငျးကြျောကာ အောငျပှဲတှကေို အရယူနိုငျခဲ့တဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ.။ အောငျလအနျဆနျးကတော့
အမရေိကနျနိုငျငံသူ ဇနီးသညျနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး သားတဈယောကျ ၊ သမီးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ.။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးကိုတော့မြားမကွာမီက မှေးဖှားခဲ့ပွီး သမီးဖွဈသူလေးရဲ့ ပုံလေးတှကေို သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ခဈြမဝဖွဈကာ တငျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီနေ့ မလေ(၂၂)ရကျနမှေ့ာတော့ အောငျလအနျဆနျးက
သူ့ရဲ့ မှေးနလေ့ေးကို ဇနီးနဲ့ သားဖွဈသူတို့နဲ့အတူ မှေးနကေိ့တျခှဲ မှေးနသေီ့ခငျြးဆိုကာ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို “Don’t ask my family to sing. youasong . P.S. protein cupcakes taste exactly like how you would thinkaprotein cupcake will taste.” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ။ အောငျလအနျဆနျးကတော့
သမီးဖွဈသူကို ခြီပွီးထိုငျကာ ဇနီးနဲ့သားဖွဈသူရဲ့ မှေးနေ့ သီခငျြးဆိုသံကို နားထောငျကာ ပွုံးရှငျစှာ လကျခုပျတီးပွီး ပြျောရှငျဖှယျမှေးနလေ့ေးကို ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ပုံပါပဲနျော..ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးလညျး ဒီကနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ အောငျလအနျဆနျးရဲ့ မှေးနအေ့တှကျ မှေးနဆေု့တောငျးလေးကို ပွောပေးခဲ့ပါဦးနျော.။
Source : Aung La N Sang(Burmese Python)’s Facebook
ဆရာတော်ရဝေနွယ်ကျောင်းမှာ Quatantine ဝင်နေသူတွေကို မုန့်များလှူခဲ့ဒါန်းခဲ့ပြီး သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ မေတိုးခိုင်